KOMBIYUUTARRADA QASHINKA QASHINKA: MA U QALANTAA INAY DIYAARISO BACRIMINTA BACAHA BALAASTIGGA AH - BACRIMINTA DABIICIGA AH
Ugu Weyn Ee Bacriminta dabiiciga ah
Diyaarinta Compost ee bacaha qashinka
Compost waa bacriminta dabiiciga ah oo laga heli karo by dusha kala duwan ee dhirta (dhirta, cuntada, ciidda, caleemaha, saqaf, digada). Kombiyuutarada waxaa laga iibsan karaa dukaamo khaas ah, adigana adiga ayaa sameeya. Diyaargarowga compost ee bacaha qashinka waa hal hab oo keliya. Badanaa isticmaal haraaga caadiga ah ama garbaha si gaar ah loo diyaariyo. Aan fiirino waxa ay compost ee boorsooyinka ka fiican.
Si aad u fahamto sida loo sameeyo compost bacaha, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado waxa bacriminta soo baxaya oo fahamaya faa'iidooyinka. Humus waxaa laga helaa natiijada ka timid waxqabadyada noocyo kala duwan ah.
Caleemaha hurda, ciidda, cawska, qashinka cuntada ee taangiga, shuban-biyoodka ayaa bilaabaya in uu saameeyo alaabta ceeriin ah. Natiijo ahaan, qaabsocodka qashinka ayaa dhacaya.
Qoyaan kale oo muhiim ah oo ah alaabta ceeriin iyo qadar ku filan ee oksijiinta. Haddii aad hal cawska kaliya dhigto, tusaale ahaan, adigoon lahayn carrada, waxaad ku xiran doontaa cusbada, ma aha compost. Bacriminta dabiiciga ah waxaa loo isticmaalaa had iyo jeer iyo meel kasta. Waa lagama maarmaan beerta for duurka berry, ee beerta, haddii ciidda ma aha mid aad u bacrin ah.
Waa muhiim! Sida for markaa xayawaanka xoolaha kadib compost kaliya ku dari kartaa shimbir shimbir iyo digada.
Sidoo kale, Bacriminta Tani waxay yaraynaysaa aysidhka ciidda. Laakiin marmarka qaarkood bacriminta lafteedu waxay noqon kartaa dhanaan. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in halabuurka uu yahay labis. Tusaale ahaan, kaliya carrada iyo cawska. Si taas looga fogaado, waxaad u baahan tahay inaad ku darto noocyo kala duwan oo ah qalabka cayriin.
Sida loo sameeyo bacrimin
Foosto ee bacaha waxaa si degdeg ah oo fudud loo sameeyaa gacmohooda. Faa'iidada ugu weyn waa raqiis. Waxaad u baahan doontaa lacag aad ku iibsato bacaha. Waa inay noqdaan kuwo cufan, mugdi ah iyo midab madow.
Waxaa laga heli karaa dukaanka qalabka dhismaha. Baakada ma had iyo jeer sheegto cufnaanta. Laakiin marka la eego, waxaad fiirin kartaa sida ay wax u kala duwan yihiin. Haddii ay adag tahay in la kala fidiyo - weelasha waxay leeyihiin cufnaan sare.
Bacaha noocaas ah waxay u adkeysan karaan heerkulka ilaa -30 ° C iyo roobab culus. Bannaanka u khibrad leh iyo bannaanka u soo jeediyaan qaadashada boorsooyinka 250 litir. Tani waxay sababtay, ciidda iyaga oo aan si degdeg ah qalajin doonaa.
Waa muhiim! In compost ma dhigi karo dhirta iyo alaabo kale oo cayriin kuwaas oo qaba cudurka. Haddii kale, cudurku wuxuu kobcin doonaa humus iyo bacriminta ayaa sidoo kale ku faafi doonaa ciidda.
Kombiyuutarrada bacaha qashinka ka qaybqaado:
dhammaan noocyada dhirta (caleenta qudaarta, caleemaha, miraha, cawska);
ukunta iyo qashinka kale ee cuntada;
haramaha carrada iyo carrada kaliya;
In bacriminta organic ha ku biirin:
biyo saabuun ah ama wax la xidhiidha kiimikada.
Ma taqaanaa? Si kor loogu qaado naqshadda nitrogen ee compost waxaa lagula talinayaa inay sameeyaan tiro badan oo ah digirta.
Bacaha leh bacrimin waxaa laga dhigi karaa meel kasta oo ku yaal goobta. Waxyaabaha qashinka ah ayaa la geliyaa lakab. Tusaale ahaan, lakabka qashinka cuntada-ciidda lakabka ah ee caleemaha qallalan. Hubso in dhammaan lakabka si adag loo xirxiray. Bacaha waa la xidhxidhay, ma sameeyaan meelo dheeraad ah oo daadinta ah.
Qoyaanku waa shardi u ah helitaanka bacriminta dabiiciga ah ee tayo sare leh. Kombiyuutarada ayaa isla markiiba ku daadi kara qadar yar oo biyo ah ka hor inta aan la xoqin bacaha.
Laakiin tani waxaa la sameeyaa oo keliya shardi ah in qeyb weyn oo ka mid ah alaabta ceeriin ay qalalan yihiin. Daawooyinka EM waxaa sidoo kale lagu daraa compost. Waxay kordhiyaan tirada jeermiska, waxay ka qaybqaataan hurdo degdeg ah.
Marka lagu daro Bacriminta organic, bannaanka iyo bannaanka u isticmaali Bacriminta macdanta (nitrogen, phosphate, potash), bio-Bacriminta, iyo Bacriminta organ-macdanta.
Bacriminta waxaa ugu wanaagsan in la dhigo dayrta. Sababtoo ah waxaa jiri doona alaabta ceeriin badan. Intaa waxaa dheer, guga, ka dib marka heerkulku hooseeyo, bakteeriyada waxay saameyn doontaa organics dhaqso.
Si aad u sameysid compost degdeg ah bacaha madaw waxaad u baahan doontaa:
Bacaha qashinka leh cufnaanta sare, siday u kala horreeyaan, midab madow.
Walxaha ceyriinka ah.
Qadar yar oo biyo ah.
Ma taqaanaa? Marka la barbardhigo godadka compost, dirxiga ee duqsiyo May ma bilaabaan bacaha of humus.
Haysashada dhammaan waxyaabahaas suurtogalka ah ee la heli karo waxaad ku heli kartaa humus organic 6 ilaa 10 bilood.
Haddii aad bacriminta ku sameysid bacaha, ka dibna isku dar maadada waa ikhtiyaari. Taangiyada buuxinta ayaa si fiican loo qabtaa hal tallaabo. Tani waxay u oggolaaneysaa dhammaan alaabooyinka inay ku kala yaacaan isla mudadaas. Jiitarka xajmiga ah ayaa sidoo kale suuragal ah. Laakiin kiiskan waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo lakabyada hoose ee compost, waana ay adagtahay in la helo.
Haddii aad rabto bacriminta dufanka leh, waxaad ka dhigi kartaa caleemaha, iyada oo lagu daray halkaas oo ammonium sulfate. Bacriminta Tani waxay ka kooban tahay nitrogen iyo sulfur, taas oo waxoogaa yar acidification waxyaabaha ku jira bamkaaga.
Fikradda khibradda leh
Dad badan ayaa dhaleeceynaya qaabka ay udheeraato organicska bacaha sababta oo ah waxay u hoggaansamaan qashinka compost. Laakiin habka kor ku xusan waxay leedahay faa'iidooyinkeeda. Marka hore, soo saarista bacriminta ee habkan ayaa kuu ogolaanaya inaad sariiraha u sameyso isla markiiba taangiyada. Waxaa lagama maarmaan ah oo kaliya in ay ku shubaan 20-30 cm oo dheeraad ah oo dhulka ah oo ka sarreeya sare ee humus. Marka labaad, bannaanka iyo bannaanka kuwa muddo dheer ku mashquulsan composting ee bacaha ku adkaysanaya socodka habkan.
Waxay ku jiifisaa xaqiiqda ah in sariiraha noocaas ah lagu qaadi karo goobta. Tusaale ahaan, haddii si lama filaan ah guga mar kale qabow, markaa isku dhafka oo dhan waxaa loo wareejiyaa dusha ama aqalka dhirta lagu koriyo.
Sidaas dhirta ma cabsanayaan qabow. Seddexaad, beerashada waxaa jira dalagyo kala duwan, waraabinta waa inaysan joogin. Humus wuxuu si fiican u ilaaliyaa qoyaanka iyo waqti dheer.
Kombiyuutarrada qashinka qashinka waa hab fiican oo loogu talagalay diyaarinta degdeg ah ee bacriminta iyo isticmaalka dheeraadka ah. Waxa kaliya oo muhiim ah in lala socdo urta. Haddii bacrimiyahaagu uriyo sida ciidda ka dib roobka, ka dibna wax walba waa la saxaa oo sheyga waa tayo sare leh. Haddii aad uriso ammonia, ka dibna badeecooyin badan oo nitrogen-ku jira ayaa lagu daray.
Xaaladdan oo kale, waxaa lagu talinayaa in lagu daro walxo cayriin oo ay ku jirto carbon. Mar walbana ur aan fiicneyn ayaa cadeyn u ah in aad jabisay tiknoolajiyada ama aad ku daray waxyaabo mamnuuc ah walxaha cayriin.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Bacriminta dabiiciga ah 2019